Caadooyinka Soo Iibsiga ee Dukaamaysatada
Wednesday, May 23, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Macaamiisha maanta waxay soo saareen dabeecado gaar ah kahor-iibsiga - xitaa markay wax ka iibsanayaan gudaha. Isticmaalka barnaamijyada moobiilka iyo shabakada mobilada intaan lagasoo iibsan qad la'aanta ayaa caan ku ah. Macaamiisha ayaa raadinaya meelo ay ka dukaameystaan, akhriska dib u eegista, raadinta heshiisyo iyo baaritaanka sheyga. Akhbaarta weyn ee tafaariiqleyda ayaa ah in wax ku iibsiga qof-qof weli muhiim yahay.
Shakhsiyan, waxaan u jeedaa inaan internetka wax ku baaro oo aan wax kaga iibsado qadka… ilaa aan ka walwalayo inaan badeecada gacmahayga ku helo isla markiiba. Waan necbahay dukaameysiga, hase yeeshe, markaa waan ka yara duwanaan karaa dadka kale. Hal shay oo aan helay sidoo kale waa dukaameysiga qadka tooska ah daruuri iima ilaalinayso wax lacag ah. Badanaa, waxaan arkaa inaan bixiyo wax badan online ka baxsan khadka.
Infographic ka Milo. Milo waa dukaamaysiga maxalliga ah ee fudud. Milo wuxuu raadiyaa khaanadaha dukaanka deegaanka waqtiga-dhabta ah si aad u hesho qiimaha ugu fiican iyo helitaanka alaabada aad rabto inaad haysato-hadda.
Tags: ecommercecaadooyinkago'aanka iibsigaiibso cilmi baariscilmitafaariiqdadukaankashoppingcaadooyinka shopping
Kireynta Kireynta Kicinta ee Cabirka Ololaha
Video: Kacaanka Warbaahinta Bulshada - The Parody
Shirkadda Boise SEO
May 25, 2012 at 4: 36 PM
Xog Wanaagsan. Waan awoodi karaa inaan isticmaalo kuwan.